Zvemagariro Media Kukosha | Martech Zone
Zvemagariro Midhi Miti
Mugovera, Kukadzi 11, 2012 Chitatu, December 26, 2012 Lorraine Bhora
Makore makumi matanhatu apfuura apo terevhizheni yakanga ichibuda panzvimbo, kushambadza kweTV kwakafanana nezviziviso zveredhiyo. Ivo vaisanganisira kunyanya wepamberi akamira pamberi pekamera, achitsanangura chigadzirwa, zvakanyanya nzira yaaizoita pawairesi. Musiyano chete waive wekuti waimuona akabata chigadzirwa.
TV payakakura, kushambadzira kwakakurawo. Sevashambadziri pavakadzidza simba rechiratidzo chekuona ivo vakagadzira kushambadza kuti vabatanidze manzwiro, vamwe vaisekesa, vamwe vaitapira kana vanonzwira tsitsi uye vamwe vakakomba uye vanokanganisa kufunga. Nepo muvhareji muoni akazara jaded nhasi, isu tinogona kutamisirwa kuseka, kuchema kana kuita nechirevo chakakodzera. (Muzviitiko zvakawanda, isu tichave tichitarisa paYouTube).
Dhizaini yeWebhu yakafamba nenzira imwecheteyo, kubva pazera remasaiti ebhurocha, takafambisa kupenya uye mifananidzo yemifananidzo kuti tifadze mushanyi, uye pakupedzisira kunzvimbo dzakareruka, dzine hushamwari, dzinoenda uko vatengi vedu varipo, pamwe nehukama hwekugadzira kushambadzira hurukuro nevashanyi.
Uye ikozvino, isu tinoona pasocial media ichipfuura nematanho akafanana. Kubva pane zvakakonzera kukurukurirana kusvika panhepfenyuro yekutengesa mameseji, vatengesi vane ruzivo vari kudzidza kuwana muyero pakati pehurukuro, kubatanidzwa uye zvishoma zvekutengesa zvinokandwa mukati. Sezvo svikiro rinokura, varidzi vemabhizimusi vadiki varikutora zvakanyanya sechikamu chekushambadzira kwavo. sanganisa.
Iko kufunga kwekushuvira here kana kuti pane chaiko shanduko afoot? Tinoda kuziva, saka zvakare tiri kuita bhizinesi diki social media ongororo uye tichienzanisa zvabuda kune makore apfuura. Isu tinoshuvira kuve nemimwe mibairo mizhinji, asi mazhinji emashoko ataona kusvika parizvino anoratidza pachena hunhu uhwu hwekukura.
Ini ndaiwanzo kushushikana nezve kublogi pane imwe nguva uye kunetseka kuti makomendi kuverenga anga asiri akakwirira zvakanyanya. Ini zvino ndazorora uye ndinoblogi kana ndine musoro wenyaya wekufarira uye ndobatanidza zvandinotumira kuti zvirarame mumunhu mashopu nekudzidziswa. Vatengi vanoda zvinongedzo kumisoro yekufarira uye ini ndiri kuona kuti vakashanya - kunyangwe kana vasina kusiya chirevo.
Kupedza yakawanda nguva pane mashoma masvikiro. Althought ini ndinogara ndichitsvaga inotevera inotevera chikuva, kana zvasvika, isu tichasiya imwe yekare.
Ini ndanga ndichishanda kuti ndigadzire yakapusa uye yakatwasuka zano iro rinowirirana nevanogona vatengi.
Ko iwe? Wachinja maitiro ako kune ino inosakura svikiro? Uri kuona zvabuda here? Tinoda kuwedzera zviitiko zvako kune yedu social media ongororo. zvinotora maminetsi mashoma (Iwo chete mibvunzo makumi maviri). Wobva watsvaga mimwe mibairo pano mushure megore rino.
Gadzira Miedzo Nyore Nekuongorora
Iyo Yemagariro Midhiya Lifecycle